IGoogle yethula inguqulo yokuqala ye-Android O futhi lezi yizindaba zayo | Izindaba zamagajethi
IGoogle yethula inguqulo yokuqala ye-Android O futhi lezi yizindaba zayo
AmaVillamandos | | Android, Izaziso
Ngonyaka owedlule, iGoogle yashesha yasungula inguqulo yokuqala yokubuka kuqala ye-Android N, kamuva eyabizwa ngeNougat. Manje i-giant search, futhi yize i-Android 7.0 ikude nokuba khona okulindelekile, yethule eyokuqala Ukubuka kuqala kwe-Android O, okuyinto ngeshwa hhayi sonke esingayihlola ngokukhululeka.
Futhi ngokungafani nalokho okwenziwe yiGoogle ngenguqulo yokuqala ye-Android Nougat, ebitholakala nge-OTA, nge-Android O noma yimuphi umthuthukisi kuzofanele alande ngesandla inguqulo entsha yohlelo lokusebenza bese elukhanyisa kudivayisi yabo.
Okwamanje sekuvele kungenzeka ukuzama i-Android O, ngazo zonke izinto zayo ezintsha futhi nakho konke ukukhubazeka kwayo ngoba masingakhohlwa ukuthi sibhekene nenguqulo yokuqala, yize kulokhu kufanele ube I-Nexus 5X, i-Nexus 6P, i-Nexus Player, i-Google Pixel, i-Google Pixel XL, noma i-Google Pixel C. Kucatshangwa ukuthi amasonto noma izinyanga ezimbalwa ukuvuselelwa kuzotholakala ukuze kuhlolwe nge-Android Beta.
1 Lawa amanoveli amasha we-Android O
1.2 Isithombe esithombeni (PiP)
1.3 Ukusekelwa Kwesikrini Esiningi
1.4 Ukuzulazula kwekhibhodi
1.5 Imikhawulo yohlelo lokusebenza lwangemuva
1.6 Izingosi Zokuxhumana Zomakhelwane
1.7 Ishayela ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza
1.8 Nabanye abaningi ...
2 I-Android O izofika nini ku-smartphone yami?
Lawa amanoveli amasha we-Android O
Kusukela esandleni se-Android O, inani elihle lezindaba ezithokozisayo lizofinyelela kumadivayisi ethu esizozibukeza ngezansi nje;
Ngenguqulo entsha ye-Android OS, I-Google ingeze isici esisha esibizwa ngokuthi iziteshi zokwazisa, okuzosivumela ukuba siqoqe izaziso zezinhlelo zokusebenza ngamaqembu. Kuze kube lapho sikubona futhi sikuthola, ngeke sikwazi ukwazi izinzuzo lokhu okuzoba nakho, kepha isibonelo kuzosisiza ukuthi sibe nesicelo sezindaba futhi siqoqe izaziso zezemidlalo nezobuchwepheshe, ngaphandle kokubona isaziso salowo nalowo izindaba njengoba kwenzeka manje.
Isithombe esithombeni (PiP)
Izinhlelo esizisebenzisayo ku-Android O zingasetshenziswa ku-Picture in mode yesithombe noma yini efanayo ukuze ividiyo iqhubeke nokudlala efasiteleni elincane noma ngabe ushintshela kolunye uhlelo lokusebenza. Le modi isivele ibonakala ku-YouTube futhi kubasebenzisi abaningi iyathandeka ngokungagwegwesi.
Ukusekelwa Kwesikrini Esiningi
Ukusekelwa kwe-Multi-screen bekungomunye wemisebenzi abasebenzisi abaningi abaphuthelwe kakhulu kumadivayisi wethu we-Android futhi manje usuka esandleni se-Android O. Ngenxa yayo, singaqalisa umsebenzi kusikrini esikude.
Ukuzulazula kwekhibhodi kwakuyinto ebivele itholakala kwezinye izinhlelo zokusebenza zeselula nokuthi abanye abakhiqizi babekade bejwayele ngaphakathi kwe-Android. Manje le nketho ingasetshenziswa ngokwendabuko ngokubonga ku-Android O.
Noma imuphi umsebenzisi angasebenzisa ukuzula ngemicibisholo namathebhu ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza, okuthile kwesinye isikhathi okuthakazelisa nokuzuzisa ngempela.
Imikhawulo yohlelo lokusebenza lwangemuva
Ibhethri nokuzimela kuyinto iGoogle egxile kuyo ezinhlokweni zakamuva ze-Android, futhi i-Android O ngeke ibe yinto ehlukile. Futhi ukuthi ngokwethulwa kwenguqulo entsha yohlelo lokusebenza sizobona ukuthi ziningana kangakanani imikhawulo kuzinhlelo zokusebenza ezisebenza ngemuva.
Le mikhawulo igxila ezindaweni ezintathu; Ukusakazwa okusobala, izinsizakalo zangemuva, nezibuyekezo zendawo, lapho sizofunda khona imininingwane ngokuhamba kwesikhathi.
Izingosi Zokuxhumana Zomakhelwane
Ukusebenza okusha kwe-WiFi kuzobakhona kunguqulo entsha ye-Android, isibonelo nge I-Neighborhood Aware Networking (NAN) ezovumela izinhlelo zokusebenza ukuxhumana ngaphandle kwendawo yokungena phakathi nangaphandle kokuxhumeka kunethiwekhi yamanethiwekhi.
Ishayela ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza
Yize lesi sici sizothakazelisa kakhulu kuma-opharetha kunabasebenzisi, asikwazi ukusiziba. Futhi lokhu kuthuthukiswa kuzogxila konjiniyela abakwazi ukwakha isikhombimsebenzisi sabo sezinhlelo zokusebenza zezingcingo ezingalawulwa futhi ziphinde ziqashwe ngedivayisi enesikrini, njengaleso esingasithola kunoma iyiphi imoto.
Nabanye abaningi ...
Lokhu ngeke kube ukuphela kwezinto ezintsha i-Android O ezosinikeza zona futhi ukuthi izithonjana eziguquguqukayo zizotholakala, esivele sizibonile kuma-Google Pixels, ukuxhaswa kwezikrini zamabanga aphezulu ezinama-chromatic, ukusekelwa kweBluetooh esezingeni eliphakeme ama-codec alalelwayo, ukusekelwa okungcono kwemithombo ye-WebView kanye ne-API yomsindo entsha yomdabu.
I-Android O izofika nini ku-smartphone yami?
I-Google isivele ikhiphe inguqulo yokuqala ye-Android O yonjiniyela ngakho-ke inguqulo entsha yesistimu yokusebenza kwe-giant search isivele iphakathi kwethu, noma kunjalo njengoba kujwayele ukwenzeka, akubona bonke abasebenzisi abakwaziyo, futhi okungafanele, ukuyifaka kwi-smartphone noma kuthebhulethi .
Khumbula lokho amadivayisi lapho unjiniyela angafaka khona i-Android O okulandelayo;
-Google pixel elingu C
Sethemba ukuthi lolu hlu lungakhula njengoba amasonto edlula, yize i-Google imanqika kakhulu ukukhipha izinhlobo zokuqala ze-Android zamadivayisi amaningi kakhulu.
Phakathi kukaMeyi noJuni inguqulo yokuqala yesibili kufanele yethulwe, ngoJuni nangoJulayi kuzofika eyesithathu, nenguqulo yokugcina yama-API e-Android Studio. Ngemuva kwehlobo kufanele sibe nenguqulo yokuqala yesine, futhi kungekudala ngemuva kokwamukela inguqulo yokugcina.
Uma sibukeza le mephu yomgwaqo ephindaphindwe cishe kuzo zonke izinhlobo ezintsha ze-Android, singajabulela i-Android O ekupheleni konyaka kwamanye amadivayisi ngendlela esemthethweni futhi ngaphandle kokusebenzisa inguqulo yokuqala ekugcineni hhayi imvume yokuba yisoftware ezivivinyweni futhi equkethe amaphutha neziphazamisi.
Ucabangani ngezici ezintsha ezizofakwa yi-Android O futhi ezizofinyelela kumadivayisi wethu ngaphambi kokuphela konyaka?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » IGoogle yethula inguqulo yokuqala ye-Android O futhi lezi yizindaba zayo
I-Unboxing nokuvela kokuqala kwe-iPhone 7 Plus (RED)
Umenzi wamawashi kanokusho uGc uzokwethula ne-Android Wear smartwatch